खाना खुवाउने कार्यको निरन्तरतासँगै उचित ठाउँको व्यवस्था होस् «
गत मंगलबार दिउँसो टन्टलापुर घाम लागिरहेको थियो । एकातिर शीतलमा मानिसहरू बसिरहेका थिए भने अर्कातिर मानिसहरू लामबद्ध भएका देखिन्थे । केही मानिसहरू एकआपसमा भलाकुसारी गरिरहेका थिए भने केही मानिस भोकले होला, त्यहीँ सुतिरहेका देखिन्थे । केही महिलाहरू भने काखे बालबच्चा च्यापेर लामबद्ध तरिकाले बसिरहेका देखिन्थे । यो हृदयविदारक दृश्य हो— राजधानीको खुलामञ्चको । यहाँ हरेक दिनजसो दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि लिएर आज खाए भोलि के खाऊँ भन्ने सर्वसाधारणहरू खाना खानका लागि लाइन लाग्ने गर्छन् ।
कोरोना भाइरसका कारणले रोजीरोटीसमेत गुमाएका, बेसहारा भएका र दैनिक ज्यालादारी गरी खाने सर्वसाधारणहरूलाई यस ठाउँमा ‘हाम्रो टिम नेपाल’ नामक सहयोगी संस्थालगायत अरू सहयोगी अभियन्ता धेरै संस्थाहरूले विगत केही महिनादेखि खाना खुवाउने अभियान चालेको थियो । सोहीअनुसार धेरैभन्दा धेरै मानिस विगत केही महिनादेखि खान खानका लागि लामबद्ध भएर बसेका थिए । तर, विडम्बना के छ भने केही हप्ताअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पत्रकार सम्मेलनमार्फत खुलामञ्चमा खाना खाने अभियानले गर्दा राजधानीलाई मागी खाने भाँडो नबनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत नगर्नसमेत सुझाव दिएका थिए । र, उनले व्यवस्थित तरिकाले खाना खुवाए महानगरले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले मंसिर २ गतेबाट खुलामञ्चमा खान खुवाउन रोक लगाउनेसमेत सम्मेलनमा जानकारी दिए । तर, मंसिर २ गते नै खुलामञ्चमा धेरै सर्वसाधारण उपस्थित भए ।
हाम्रो टिम नेपाल सहयोगी एक प्रतिनिधिले भने, “महानगरपालिकाले भनेअनुसार वीर अस्पतालको छेउछाउ तथा वरपर मिलाएर व्यवस्थित तरिकाले खान खुवाउन तयारी गरे पनि त्यहाँ कोही पनि आउन मानेनन् । खुलामञ्चमा उनीहरूको दर्दनाक अवस्था देखी मन थाम्न नसकेर हामीले प्रशासनको आदेशलाई उल्लङ्घन गरेर भए पनि आज हामीले खाना खुवायौं ।”
धेरै सर्वसाधारणले महानगरपालिकाको खाना खाने कार्य बन्द गर्ने निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । खाना खान आएका एक सर्वसाधारणले भने, “हाम्रो टिम नेपाललगायत अभियन्ताहरूले यदि हामीलाई खाना नखुवाएको भए हामी यत्रो महामारीमा भोकभाकै रहन्थ्यौं । के हाम्रो भोक त्यो महानगरपालिकाले बेहोर्छ ? यदि यस्तो पुण्य कामलाई पनि महानगरले रोक्न खोज्छ भने हामी पुलिस प्रशासनको आदेशलाई पनि उल्लङ्घन गर्न तयार हुनेछौं ।”
फेरि त्यसै क्रममा अर्का व्यक्तिले भने, “अभियन्ताहरूले हामीलाई यत्रो ठूलो सहयोग गर्नुभयो, हामीलाई भोको हुनबाट बचाउनुभयो । तर, सरकारलाई भने हामीले खाना खाँदैमा लाज हुने ? सरकारले आजसम्म कुनै विकल्पको पनि व्यवस्था नगर्ने अनि अभियन्ताहरूले खुलामञ्चमा खाना खुवाए भनेर सरकारलाई लाज हुने ? यो कस्तो विडम्बना ?” सर्वसाधारणहरूले आक्रोश पोखे ।
हुन त काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि मंसिर ३ गते बुधबारदेखि थापाथली प्रसूतिगृहपछाडि अभियन्ताहरूसँगै मिलेर दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरूलाई खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ । छिट्टै नै व्यवस्थित तरिकाले पार्टी प्यालेसमा लगेर समेत खाना खुवाउने योजनामा महानगरपालिका लागेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा विगत आठ महिनादेखि व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा मात्र होइन, मानिसहरूको दैनिक जीवनयापनमा समेत असर परिरहेको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणको रोजीरोटीसमेत खोसिएको छ । चरम आर्थिक अभावका कारण धेरै मानिसले आत्महत्या गरिसकेको तथ्याङ्क छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा गरिब, दुःखी, दैनिक ज्यालादारी गरी खाने मानिसहरूलाई खुलामञ्चमा अभियन्ताहरूले गरेको कामप्रति हामी सबैले गर्व गर्नैपर्छ ।
खाना खुवाउने कार्य